Knowledge – Page 57 – Shwe Sar
အူ ကို ကျန်းမာစေနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး အစားအစာ များ
အူကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းရတာလည်းက နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းသလို ပါပဲ။အလွန်ကိုအရေးကြီးလှပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် အူကျ န်း မာ ဖို့လည်းအဓိက ကျလှပါတယ်။ အူမကျန်းမာရင် ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ အူရောင်ခြင်းနှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အူကျန်းမာဖို့အတွက် ဘယ်လိုအစားအစာတွေကို စား […]
ခြေထောက် ၃ နှစ် ၃မိုး ကိုက် ခဲ ခဲ့ တာ ဒီနည်း နဲ့မှပျောက်တော့ တယ် ဗျာ
ကဲဗျာချစ်မိတ်ဆွေတိုဒီတစ်ခါ အလွှယ်ဆုံးနည်းလေ ဝယ်ရလွယ်တဲ့မြန်မာဆေးနည်း ခရမ်းသီးလေး အကြာင်းပြောပြချင်တယ်ဗျ။သုံးနှစ်သုံးမိုးအမြဲကိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်ခြေထောက်လေး ဆေးေ သာ က်လည်းခဏပဲသက်သာတာအကိုက်ပျောက်ဆေး ထိုးလည်းခဏပဲသက်သာတာအခုတော့ခရမ်းသီးကို အရေညစ်ပြီးကိုက်တဲ့နေရာကို လိမ်းတာအခုတော့ ပျောက်နေပြီဗျ ကျွန်တော် ပျောက်သလိုကျွန်တော့လို ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာရှင်တွေလည်းပျောက်စေချင်တဲ့ စေတနာမေတ္တာနဲ့ ဒီဆေးနည်းလေး ပြောပြပါရစေ။အ ရင်ဆုံးခရမ်း သီးကိုေ […]
နေမကောင်းဖြစ်နေ ချိန် သောက်သင့် တဲ့ အားဖြည့် ဖျော်ရည်တွေ
ခုလိုရာသီဥတုက လူတော်တော်များများ ဖျားနာနေမကောင်းဖြစ်တတ်ကြတာ သတိထားမိမှာပါ။ လေထဲမှာက ရောဂါပိုးမွှားတွေ အမြဲပျံ့နှံ့နေတာဆိုတော့ ဘယ်လောက်ပဲ ကျန်းမာပြီး ဒေါင်ေ ဒါ င်မြည်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခေါက်လောက်ကတော့ ဖျားလိုက်ကြတာပါပဲ။ ဖျားတော့ဘာဖြစ်မလဲ၊ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ကိုယ့်အလုပ်၊ တာဝန်၊ ပညာရေးကို ထိခိုက်လာမယ်၊ […]
မြန်မာပြည် မှာ အသုဘ ပို့ပြီးပြန် လာတာနဲ့ ဘာ လို့ တရော်ကင်ပွန်းနဲ့ လက်ဆေး ရ တာလဲ ??
အသုဘ ပို့ပြီး ပြန်လာရင် တရော်ကင်းပွန်းကို ဘာကြောင့် အသုံးပြုရလဲဆိုတာ သိရအောင် ပြန်လည်မျဝေပေးထားတာပါ။ဒွတ္တဘောင် မင်းကြီးဟာ စစ်တိုက်ပြီးပြန်လာတော့ ပန်ထွာမ င်းသ မီးရဲ့တိုင်းပြည်မှာ တစ်ညဝင်အိပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပန်ထွာမင်းသမီးဟာ မင်းကြီးဘုန်းကံနိမ့်အောင်ဆိုပြီး မီးနေသည်ထမီနဲ့ရက်လုပ်ထားတဲ့ မျက်နှာသုတ်ပဝါကို မျက်နှာသု တ်ဖို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ […]
ဗေဒင်ယတြာ မလို ဘဲ တနေ့တခြား ကံတွေကောင်း လာ မည့် အောင်အိုးလှူနည်း
နဂါးမတောင်မှ ဝိဇ္ဇာဓိုရ် ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ အောင်အိုးလှူနည်း ဆရာတော်ကြီးများမေတ္တာဓာတ်ခံယူပြီး ဘုရားကိုလှူဒါန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ယတြာ ချေ စရာမလိုဘဲအခက်အခဲများပပျောက်စေခြင်း၊ အောင်ဓာတ်ရပြီး အဆင်ပြေအောင်မြင်စေခြင်း၊ ဆရာတော် ကြီးေ တွရဲ့ မေတ္တာဓာတ်ကိုခံယူနိူင်ခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုရနိုင်တဲ့ ရတနာသုံးပါးကိုဦးထပ်ထားတဲ့အောင်အိုးလှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အောင်အိုးထဲမှာ ၊အုန်း၇ညွန့် ၊သပြေ၇ညွန့် ၊ကံကော် […]
ရွှေဝ င်ငွေဝင် ဆွမ်းတော် တင် ကုသိုလ်ပြုနည်း
လုပ်ငန်းလုပ်ရင်း ငွေမဝင်သူတွေ အရောင်းပါးနေသူတွေ ထွက်ငွေက ဝင်ငွေထက် များနေသူတွေအတွက် ရွှေဝင်ငွေဝင် ဆွမ်းတော်တင် ကုသိုလ်ပြုနည်းလုပ်ငန်းလုပ်နေရင်း ငွေမဝင်သူများ /ဆိုင် တွင် အရောင်းပါးနေသူများ/ကြွေးများပေးရန်ရှိသူ ရရန်ရှိသူများ/အိမ်တွင် လာဘ်ပိတ်၍ ထွက်ငွေကဝင်ငွေထက်များနေသူများ လှူဒါန်းသင့်သော ကုသိုလ်ပြုနည်း ဖြစ်ပါတ ယ်။ဆွမ်းေ […]
မာလကာသီး စား ရင် ရရှိနိုင် တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့..
ဗီတာမင်စီဓာတ် ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်.. ဗီတာမင်စီပါဝင်မှုကိုကြည့်ရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆီးဖြူသီးပြီးရင် မာလကာသီးဟာ ဒုတိယလိုက်ပါတယ်.. ဆီးဖြူသီး 100 g မှာ Vitamin C ဟာ 700 mg ပါဝင်ပါတယ်.. မာလကာသီး အနေတော်တစ်လုံး (100 […]
အိပ်မောကျခါနီးမှာ ခန္ဓာကိုယ် က အ လိုလို ဆတ်ခနဲဖြစ်သွားလေ့ ရှိတာ ဘာကြောင့်လဲ…?
အိပ်မောကျခါနီး အချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်က ဆတ်ခနဲ၊ သိမ့်ခနဲ ဖြစ်သွားတဲ့ ခံစားချက်မျိုးကို ခံစားဖူးလား…၊ တကယ်တော့ ဒီလို ဖြစ်ရခြင်းက ကြွက်သားတွေ လှုပ်ရှားခြင်းကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ပညာရှင်ေ တွရဲ့ လေ့လာချက်တွေက ဖော်ပြနေပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းက […]
လမ်းတွေပေါ်မှာ ထုံးဖြူးရုံ နဲ့ ကိုဗစ်ကို ကာကွယ်နိုင်ပြီလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်း ရဲ့ အဖြေ
ထုံးက ပိုးသေတယ်ဆိုပြီး လမ်းပေါ် ထုံးဖြူးထားချက်က ကားတခါ ဖြတ်မောင်းသွားတိုင်း မြူ တွေဆိုင်းနေသလိုလို အိမ်ထဲထိတောင် ဖွေးနေတာပဲ။ နှာခေါင်းကလော်လိုက်ရင် နှပ်ချေးေ တာ င်ဖွေးေ ဖွးဖြူတယ်။ ဒါနဲ့ မေးပါရစေဦး…. ပိုးက မြေ ကီးပေါ်မှာ […]
အလန်းစားပိုစ့်တွေနဲ့ ရင်ခုန်အောင် လုပ်လိုက်တဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူး
အိမ်နေရင်းဖက်ရှင်လေးနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးလို ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် လုလုအောင်
မိမိုက်ဂေါ်ထွက်နေတဲ့ ဖက်ရှင်လေး ကို ဆင်မြန်းပြီး အထာကျကျပို့စ်တွေပေးကာ အရမ်းလန်းနေတဲ့ မထက်
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေရင်းတောင်မှ ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေတဲ့ သင်ဇာ ရဲ့ VIDEO လေး